Homeसमाचारझन्डै ८२ घण्टापछि खनालको जीवितै उ’द्धार, जो बाँच्नका लागि पिसा’बसमेत खाए
April 25, 2021 admin समाचार 2789
भूमिकास्थान नगर’पालिका–१ साम्ने गाउँका ३१ वर्षीय ऋषि खनाल २०७२ साल वैशाख १४ गते वैदेशिक रोजगा’रीका लागि यूएईको दुबईतिर उड्नु थियो। हवाई टिकटसमेत भइस’केको अवस्थामा खनाल काठ’माडौंसम्म पुगेका थिए। तर, १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले विदेश गएर धन कमाउने सपना च’कनाचु’र पारिदियो। त्यति मात्रै होइन, झन्डै ८२ घण्टापछि खनालको जीवितै उद्धा’र गरियो। भाग्यले बाँचे १
गोंगबुस्थित साततले गेस्टहा’उसको पहिलो र दोस्रो तला भूकम्पले भत्कि’एको थियो। तर, माथिल्लो चार तला कायमै थियो। त्यही भत्किएको तलाबाट खनालको उद्धा’र सशस्त्र प्रहरी र फ्रान्सको खोजी तथा उद्धार टोलीले १० घण्टाको अथक प्रया’सपछि गरेको हो।
खनालले आफ्नो उद्धा’रपछि बाँच्नका लागि पि’साब’समेत खाएको बताएका थिए। उनले ढुंगाका स–साना टु’क्रा बाहिर फालेर उ’द्धार टोलीको ध्यान खिचे’का थिए।
उनको देब्रे खुट्टा का’टि’एको छ। उपचार खर्च सरका’रले बेहोर्यो। तर, काठमाडौं आउ’जाउ, औ’षधि खर्च गर्दा अढाइ लाखभन्दा बढी रकम सकियो । भन्छन्, ‘भूकम्प’मा परेर अं’गभं’ग भएका म र मजस्ता साथीहरूले सीप सिकेर जीविको’पार्जन गर्न चाहेका छौं।’
काठमा’डौंमा विभिन्न संघ–संस्थाले सीप’मूलक तालिम निःशुल्क दिने भनेका थिए। तर, सम्प’र्कै गरेनन्। निःशुल्क भए पनि काठमाडौंमा भाडा तिरेर बस्ने, बिहान–बेलुका खाने स्रोतसमेत जुटाउन नसकेर सीपमूलक तालिम लिन नसकेको ख’नाल सुनाउँछन्। खाने, बस्ने व्यवस्था गरिदिए भूकम्पमा परेर हात खुट्टा गुमाएका आफूजस्ता साथी’हरूले सीप सिकेर केही काम गरेर खान सक्ने उ’नको भनाइ छ। यो स’माचार अन्नपूर्ण पोस्ट छ र। इताजा खबरबाट
कोरोनाको फेरी नयाँ स्ट्रेन फेला, हावामा एक घ’न्टा बस्छ
June 1, 2021 admin समाचार 2289
के हो महिनावारी कप भनेको ? महिलाहरुको रो’जाईमा कसरी पर्दैछ ? एक पटक किनेपछि १२ बर्षलाई ढुक्क
June 11, 2021 admin समाचार 2504
काठमाडौं महानगर’पालिका ३१ नयाँ बानेश्वरकी सम्झना बानियाँले महिनावारी भएको समयमा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्न छोडि’सक्नुभएको छ । उहाँले दुई बर्ष यता महि’नावारी कप प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । बानियाँ भन्नु’हुन्छ ‘प्याड जसरी बेला बेलामा किनिरहनु
February 26, 2021 admin समाचार 5220
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194482)